NS Malagasy Archive | NewsMada | Page 4
Boriborintany faha-4: ankizy 600 hahazo kopia
Par Taratra sur 14/09/2019 Faits Divers, NS Malagasy
Nanatanteraka hetsika kopia faobe ny teo anivon’ny Boriborintany faha-4, kaominina Antananarivo Renivohitra (Cua), niarahana tamin’ny fikambanana Koloaina izay mpiara-miasa akaiky amin’ny boriborintany amin’ny fanaovana asa sosialy, indrindra eo amin’ny sehatra fikarakarana ny sora-piankohonana toy izao. Omaly, nisy ny fitsarana ireo ankizy izay hisitraka izany kopia izany toy ny fanadihadiana ankapobeny , ny fandraisana ny antontan-taratasy…. […]
Seces Antananarivo: manao antso avo amin’ny praiminisitra
Par Taratra sur 14/09/2019 Divers, NS Malagasy
Nivory ny Seces sampana Antananarivo, ny alakamisy teo ary nanisy tsindrim-peo mikasika ny asan’izy ireo. Miantso ny praiminisitra sady lehiben’ny governemanta izy ireo mba hanome toky azy raha toa ka mbola voatazona na tsia ny teny nifanomezana vita sonia tao amin’ny Lapam-panjakana Mahazoarivo, ny 14 aprily 2019. Mahakasika ny vahaolana nentin’ny praiminisitra ny hampitsaharana ny […]
Ambohimangakely: hanomboka ny asa fanalana ny vatobe
Raha ny fivoriana nataon’ny teknisianina avy ao amin’ny birao nasionaly misahana ny loza voajanahary (BNGRC) dia hotanterahina ny alatsinainy izao ny fanalana ilay vatobe etsy Ambohibary, fokontany Tsarahasina, kaominina Ambohimangakely. Niarahana tamin’ny distrikan’Antananarivo izany dinika izany. Efa nisy rahateo ny fidinana ifotony, natao ny 30 aogositra teo ka tapaka fa hovakina tsikelikely ilay vatobe izay […]
Trano fandihizana ao Toamasina: misy tale manao bontolo tsy hanara-dalàna
Niteraka resabe ao Toamasina ny fanampahan-kevitra noraisin’ny prefet, Benadrasana Cyril, tamin’ny fanakatonana ireo trano fandihizana izay tsy manaran-dalàna. Amin’ny akapobeny, nankasitrahan’ireo raiamandreny sy mpitarika fikambanana ary indrindra ireo rafi-piaraha-monina iny fanampahan-kevitra iny. Nahagaga ny mpanaram-baovao tao Toamasina kosa fa tale amina haino aman-jery iray tsy miankina izay heverin’ny rehetra fa olona akaiky ny filoham-pirenena indray no […]
Sekoly fanomanana “doctorat”: hiverina ny fanaovana “soutenance”, manomboka amin’ny alatsinainy
Hiverina, manomboka amin’ny alatsinainy ho avy izao, ny fanaovana fanohanana voka-pikarohana (soutenance) ho an’ny mpampianatra manomana ny “doctorat” amin’ny fampianarana ambony, izay niato tao anatin’ny fotoana maromaro, araka ny tapaka taorin’ny fivoriana nataon’ny filohan’ny oniversite sy ny solontenan’ny collectif de professeurs ary ireo talen’ny sekoly ambony fanomanana ny doctorat mahatratra 30. Satria mpampianatra manana ny […]
Fiarovana ny tontolo an-dranomasina any Avaratra: hampiharina ny dinabe hampahomby ny fitantanana
Iharan’ny tsindry koa ny harena an-dranomasina ao amin’ny faritra Diana, ahina ho rava raha tsy misy ny fiarovana. Ampiharina araka izany ny dinabe hampahomby ny fitantanana. Izay no nahatonga ny mpiandraikitra ny tetikasa Kobaby nitondra ny mpikambana ao amin’ny Mihari, vondron’olona ifotony Mitantana ny harena an-dranomasina eny ifotony sy ny tompon’andraki-paritra (mpitandro filaminana, olona misahana […]
Imbiki Herilaza: “Atao aloha ny fifidianana”
Par Taratra sur 14/09/2019 NS Malagasy, NS-Politique
“Zavatra roa no azo atao. Tsy maintsy miainga amin’ny lalàna isika. Eo ny lalàna 2014-020 izay momba ny vondrombahoakam-paritra itsinjaram-pahefana. Voalaza amin’izany ny momba ny kaominina sy ny fifidianana kaominaly.” Izay ny fanazavan’ny mpahay lalàna, Imbiki Herilaza, ny amin’ny fifidianana ben’ny Tanàna sy ny fifidianana mpanolotsain’ny Tanàna, hatao amin’ny 27 novambra ho avy izao, izay […]
Par Taratra sur 14/09/2019 En Bref, NS Malagasy
Dimy ny kandidà ho ben’ny Tanàna, Antananarivo Renivohitra: Andriantsitohaina Naina atolotry ny Isika rehetra miaraka amin’i Andry Rajoelina (IRD), Randriamasinoro Tahiry Ny Rina (Tim) avy amin’ny Tiako i Madagasikara (Tim), Rakotoariso Faniry Alban kandidàn’ny Antoko politika madio (APM), ary ny tsy miankina roa: Raharimanana Elias sy Andrianjoelina Feno Harison. Nilaza ny Rodoben’ny mpanohitra ho amin’ny […]
Fifidianana tany Rosia: averina ny fanisam-bato amina faritra maro
Manomboka mampiseho ny tsy fankatoavana ny fitondran’i Vladimir Poutine ny vahoaka rosianina, raha ny fifidinana natao ny 8 septambra teo. Fifidianana tany anivon’ny kaominina sy ny faritra, fa misy akony lehibe eo anivon’ny fitondrana foibe. Amina renivohitry ny distrika 45, 20 amin’ireo tsy azon’ny kandidà tohanan’ny fitondrana foibe. Saika lasan’ny kandida komonista ny fandresena, ankoatra […]
Fifidianana kaominaly: feno ihany ny kandidà ben’ny Tanàna amin’ny kaominina 1695
Tsy mihemotra ny fifidianana ben’ny Tanàna sy mpanolotsain’ny Tanàna. Feno ihany, ny kandidà ben’ny tanàna amin’ny kaominina 1695 manerana ny Nosy, raha kaominina roa kosa no tsy manana kandidà mpanolotsain’ny Tanàna. “Raha ny tarehimarika vonjimaika voaray ety amin’ny Ceni foibe, Alarobia, hatramin’ny omaly antoandro: kaominina 21 tsy nahitana antontan-taratasy firotsahan-kofidina ho ben’ny Tanàna amin’ireo kaominina […]
Rabetsaroana Sylvain : “Manana traikefa ny kandidà Andriantsitohaina Naina”
“Taitra aho sady faly mahita azy mirotsaka io, fa mila fahasahiana io. Manana traikefa izy, mitantana orinasa maro ary tena miroborobo”, hoy ny loholona teo aloha, Rabetsaroana Sylvain, ny amin’ny firotsahan’ny kandidà atolotry ny Isika rehetra miaraka amin’i Andry Rajoelina (IRD), Andriantsitohaina Naina, ho ben’ny Tanànan’Antananarivo Renivohitra amin’izao fifidianana kaominaly izao. Minisitry ny Raharaham-bahiny izy, […]
Jery taratra… herinandro: lasa ny Papa, tonga ny fifidianana…
Vita ny fitsidihana apostolika, nandao an’i Madagasikara ny Papa Fransoa. Maro ny fanehoan-kevitra nilaza fa zava-dehibe ny fitsidihany, indrindra ny hafatra napetrany. Nahasahana lafin-javatra maro izany: ny ady amin’ny kolikoly, ny fiarovana ny tontolo iainana, ny fifampitsinjovana amin’ny alalan’ny fihavanana… Nisy ny hafatra sy fisaoran’ny filoha Rajoelina noho ny fahatomombanan’ny fitsidihan’ny Papa. Anisan’izany ny fiangonana […]
Nahatrarana basy sy bala: nidoboka am-ponja ireo jiolahy tratra teny Ambohijanaka
Nidoboka am-ponja, omaly ireo jiolahy tompon’antoka tamin’ny fanafihana toeram-pivarotana hanimasaka eny Ambohijanaka, ny zoma lasa teo. Tratran’ny zandary tany amin’ireo jiolahy ny fitaovana mampiahiahy toy ny fitaovam-piadiana, niampy menaka, bisky, fromazy sy zavatra maro isan-karazany. Taorian’ny fitarainana nataon’ireo niharan’ny fanafihana no nahafahan’ny zandary avy ao Ambohijanaka nanenjika ireo jiolahy ka izao niafara tamin’ny fahatrarana azy […]
Ankoatra ireo efa any am-ponja: saron’ny polisin’ny BC ny jiolahy iray nividy fiara halatra
Noraisim-potsiny! Tratran’ny polisy avy amin’ny sampana fikarohana heloka bevava, sakelika fahefatra (BC4), ny alarobia teo ny jiolahy iray isan’ireo tompon’antoka tamin’ny fividianana halatra sy firaisana tsikombakomba amina andian-jiolahy. Nambaran’ny polisy, fa tranona teratany sinoa iray no nisy nanafika, ny desambra 2018 ka fiara 4×4 iray sy telefaonina finday no lasan’ireo jiolahy tamin’izany. Nisy ny fanadihadiana nataon’ny […]
Ambatomitraka-Antalaha: rongony 5 kilao tratra tamina raim-pianakaviana
Lehilahy roa nitondra kitapo nisy rongony milanja 5 kilao, tsikaritry ny Polisy mpanao fisafoana tao amin’ny fokontanin’Ambatomitraka fa nanao fihetsika hafahafa, ny Talata teo. Araka ny loharanom-baovao dia nitsoaka avy hatrany ny iray amin’izy ireo vao nanatona ny mpitandro filaminana fa ilay raim-pianakaviana kosa tsy tafahetsika ka voasambotra tamin’izany. Rehefa natao ny fisavana ny kitapo […]
Hitan’ny “camera de surveillance”: lehilahy iray saika hangalatra volan’ny mpiasa 160 tapitrisa Ar
Voasambotry ny polisin’ny Sut, afakomaly ny lehilahy iray voarohirohy ho tompon’antoka tamin’ny fikasana hangalatra ny vola karaman’ny mpiasa mitentina 160 tapitrisa Ar tao amin’ny orinasa afakaba iray eny Forello Tanjombato. Hita tao anaty “camera de surveillance” izy… Tonga nametraka fitoriana teny amin’ny polisy ny Sinoa iray tompona orinasa afakaba iray momba ny fahamaizan’ny orinasany. Tonga […]
Fiovana… iombonana sy mpiombona
Par Taratra sur 14/09/2019 Edito Taratra, NS Malagasy
Inona koa ny manaraka? Tsy inona fa ny trangan-javatra lehibe manetsika ny vahoaka manontolo. Teo, ohatra, ny dingana lehibe vitan’ny ekipam-pirenena malagasy Barea tamin’ny Can 2019 tany Ejipta. Farany teo, raha raisina sy heverina ho toy izany: ny fitsidihana apostolika nataon’ny Papa. Lalao baolina kitra natao tany ivelany ny voalohany; ny faharoa, vahiny avy any […]
Par Taratra sur 14/09/2019 Faits Divers, La Une - Taratra, NS Malagasy
Efa voasambotry ny polisin’ny Sut etsy Tsaralalàna ilay nisandoka ho mompera, sy ireo roalahy niray petsapetsa taminy. Mbola karohina kosa ireo roavavy, nisandoka ho masera. Vary 250 gony, hoe hamahanana ireo mpivahiny teny Soamandrakizay no nosolokian’izy ireo tamin’ny mpamongady vary iray. Lehilahy mpivarotra vary ambongadiny no nosolokina mompera sy masera roa vavy sandoka, ny zoma […]
Ranty sy teatra: hiaka-tsehatra ny tropy Victor Solo
Par Taratra sur 13/09/2019 NS Malagasy, NS-Culture
Ny 22 septambra izao, holalaovin’ny tropy Victor Solo ao amin’ny Alliance Française etsy Andavamamba (AFT) ilay tantara « Kapoaka sa vahoaka ». Noho io andron’ny 22 septambra io mifanandrify amin’ny nilalaovana ny teatra malagasy voalohany tao Ambatovonaky (22 septambra 1899), hisy fampirantiana famintinana, hatao ny zoma 20 septambra ka hatramin’ny 22 septambra eny an-toerana. Raha ny fanazavan-dRavaloson […]
Antananarivo: tratran’ny tsy fanjarian-tsakafo ny 49%-n’ny ankizy
Par Taratra sur 13/09/2019 Divers, NS Malagasy
Manatanteraka atrikasa ho fitadiavam-bahaolana maharitra, amin’ny tsy fanjarian-tsakafo ny kaominina Antananarivo Renivohitra sy ny Action contre la faim (ACF). Mahatratra 49%-ny ankizy latsaky ny 5 taona eto Antananarivo Renivohitra no tratran’ny tsy fanjaraian-tsakafo. Araka ny fanadihadiana nataon’ny ACF, teto amin’ny kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA), tamin’ny volana mey sy jona teo dia 49,3% ny zaza latsaky […]
Tsipy kanetibe: tsy mety mankato ny FSBM ny minisitera
Tsy mbola voavaha ny olana iainan’ny taranja tsipy kanetibe, hatreto. Tsy mitondra any amin’ny fitoniana sy filaminana mantsy ny taratasy nomen’ny minisitera, fa mametraka ahiahy. Nihaona tamin’ny mpanao gazety, tetsy amin’ny Solimotel Anosy, omaly alakamisy, Randriamarohaja Dolys sy Rakotoarivelo Irma Juliette ary i Amir Moez Amidou, izay nomen’ny minisiteran’ny fanatanjahantena, taratasy fankatoavana sy fahafahana miasa, […]
Drafitr’asa Kazan: hitondra zava-baovao ho an’ny Spaoro Afrikanina
Par Taratra sur 13/09/2019 NS Malagasy, NS-Sports
Hatolotra hodinihin’ireo minisitra afrikanina miisa 20 mianadahy, anio, ilay drafitr’asa Kazan, novolavolain’ny manam-pahaizana manokana 80 avy amin’ny firenena 37. Drafitr’asa hanovana endrika ny fanatanjahantena aty Afrika, tafiditra amin’izany ny fampandrosoana anatin’ny fahasalamana sy ny fandriampahalemana, fanafoanana ny fanilikilihana ireo olona manana fahasembanana ara-batana, ary ny fampitoviana zo ny lahy sy vavy, eo amin’ny fanaovana fanatanjahantena. […]
Tenisy – Coupe Davis: nandresy an’i Bénin i Madagasikara
Nahomby ny andro faharoa natrehin’ny ekipa malagasy miatrika ny « Coupe Davis Zone Afrique, Groupe III », tanterahina any Kenya. Nandresy ny ekipan’ny Bénin, tamin’ny seta 2 noho 1 (6/3 3/6 7/6), i Madagasikaran tamin’ny alalan-dRanaivo Toky sy Rakotondramanga Antso. Azo lazaina ho mbola hanana vintana ihany hiakarana amin’ny dingana manaraka, araka izany, ny ekipa malagasy, satria, […]
Jirama: hanafatra solika mivantana any ivelany
Nankatoavin’ny filankevitry ny minisitra, ny alarobia 11 septambra teo, ny fandaniana ny fangatahana alalana hividy mivantana solika any ivelany, tsy mandalo antso tolo-bidy, hampiasain’ny orinasa Jirama. Mila ampahafantarina mialoha ny filoham-pirenena sy ny praiminisitra anefa ny fanatanterahana izany, izay ao anatin’ny fotoana voafetra ihany. Azo adika fa tsy hividy solika amin’ireo mpaninjara efatra eto an-toerana […]
HaiRun sy Miarakap: fiaraha-miombon’antoka handrosoana
Par Taratra sur 13/09/2019 Economie, NS Malagasy
Orinasa tantanina tanora ny HaiRun, misehatra amin’ny lafiny tontolon’ny informatika, antsoina hoe « intelligence artificielle », azo adika ho fahaizana foronina amin’ny alalan’ny teknolojian’ny informatika. Haingana ny firoboroboany satria raha 10 ny isan’ny mpiasa tamin’ny taona 2017, nananganan’Andriambololona Ranto, filoha tale jeneraly (PDG) azy, efa tafakatra 60 amin’izao fotoana izao. Tsy nionona teo, fa misy indray ny […]
« Précédent 1 2 3 4 5 6 … 1 167 Suivant »
Fitananam-bola eny amin’ny oniversite: ho avy ny « agent comptable » hanatsara ny fomba fiasa 17/09/2019
Indray mijery 17/09/2019
Fanadinana BEP: 8577 ireo mpiadina manerana ny Nosy 17/09/2019
Betsaka ny ezaka vita tao anatin’ny 32 taona: ho sitrana tanteraka ny sosona ozona, ny taona 2060 17/09/2019
Basikety: voaroaka toy ny mpangalatra ny mpanao gazety 17/09/2019
An-kitsim-po: fotodrafitrasa tsy ampy